vivo V21e丨vivo Myanmar
44MP Ultra HD Selfies. Auto-Focus (AF) ပါဝင်တဲ့ 44MP ultra HD ကင်မရာဟာ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကြည်လင်ပြတ်သား
စွာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးနိုင်မှာပါ။ မြင်ကွင်းချုံ့ပြီးနောက်မှာတောင် မင်သက်လောက်တဲ့ အသေးစိတ်ကျကျ လှပမှုတွေကြောင့် အံ့သြ
သင့်နေမှာပါ၊ pixel လေးတစ်ခုစီမှာ အလှတရားကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
44MP Ultra HD Selfies. Auto-Focus (AF) ပါဝင်တဲ့ 44MP ultra HD ကင်မရာဟာ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူ
ရိုက်ကူးပေးနိုင်မှာပါ။ မြင်ကွင်းချုံ့ပြီးနောက်မှာတောင် မင်သက်လောက်တဲ့ အသေးစိတ်ကျကျ လှပမှုတွေကြောင့် အံ့သြသင့်နေမှာပါ၊ pixel လေး
တစ်ခုစီမှာ အလှတရားကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
44MP Ultra HD Selfies. Auto-Focus (AF) ပါဝင်တဲ့ 44MP ultra HD ကင်မရာဟာ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးနိုင်မှာပါ။ မြင်ကွင်းချုံ့ပြီးနောက်မှာတောင် မင်သက်လောက်တဲ့ အသေးစိတ်ကျကျ လှပမှုတွေကြောင့် အံ့သြသင့်နေမှာပါ၊ pixel လေးတစ်ခုစီမှာ အလှ
ရှေ့ကင်မရာ AF ဟာဆိုရင်တော့ ၁၅ စင်တီမီတာ အကွာကနေ အဆုံးမရှိ ရှင်းလင်းကြည်တောက်ပနေအောင် ဆုံချက်ချိန်ပေးနိုင်လို့
ဘယ်အကွာအဝေးက ရိုက်ရိုက် ကြည်လင်တောက်ပလွန်းတဲ့ ဆယ်ဖီအလှပုံတွေကို ရရှိစေမှာပါ။ သင့်မျက်လုံးနောက်ကို ရွေ့လျားလိုက်ပါ
ရိုက်ကူးပေးနိုင်လို့ သင်က လှုပ်ရှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငြိမ်သက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောင်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်မှာ သင့်ကို ထင်ရှားစွာ
ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် ဘယ်နေရာကိုပဲ ဗဟိုဆုံချက်ထားပါစေ ဟန်ချက်ညီညီ ကွက်တိဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
ရှေ့ကင်မရာ AF ဟာဆိုရင်တော့ ၁၅ စင်တီမီတာ အကွာကနေ အဆုံးမရှိ ရှင်းလင်းကြည်တောက်ပနေအောင် ဆုံချက်ချိန်ပေးနိုင်လို့ ဘယ်အကွာ
အဝေးက ရိုက်ရိုက် ကြည်လင်တောက်ပလွန်းတဲ့ ဆယ်ဖီအလှပုံတွေကို ရရှိစေမှာပါ။ သင့်မျက်လုံးနောက်ကို ရွေ့လျားလိုက်ပါရိုက်ကူးပေးနိုင်လို့
သင်က လှုပ်ရှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငြိမ်သက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောင်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်မှာ သင့်ကို ထင်ရှားစွာ ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်
ဘယ်နေရာကိုပဲ ဗဟိုဆုံချက်ထားပါစေ ဟန်ချက်ညီညီ ကွက်တိဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။
ရှေ့ကင်မရာ AF ဟာဆိုရင်တော့ ၁၅ စင်တီမီ
တာ အကွာကနေ အဆုံးမရှိ ရှင်းလင်းကြ
ဘယ်အကွာအဝေးက ရိုက်ရိုက် ကြည်လ
င်တောက်ပလွန်းတဲ့ ဆယ်ဖီအလှပုံတွေကို ရရှိ
စေမှာပါ။ သင့်မျက်လုံးနောက်ကို ရွေ့လျား
လိုက်ပါရိုက်ကူးပေးနိုင်လို့ သင်က လှုပ်ရှားနေ
ဘောင်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်မှာ သင့်ကို
ထင်ရှားစွာ ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်
ဘယ်နေရာကိုပဲ ဗဟိုဆုံချက်ထားပါစေ ဟန်ချ
က်ညီညီ ကွက်တိဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆော
အသစ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Super Night Selfie ဟာ multi-frame optimization နဲ့ multi-level exposure ကို ပေါင်းစပ်ထားလို့ ညရဲ့ အနုစိတ်အလှတရားကို ပြန်လည်ခံစားရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းနားလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ညတစ်ညထက် သင်က ပိုမိုတောက်ပနေမှာပါ။
အသစ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Super Night Selfie ဟာ multi-frame optimization နဲ့ multi-level exposure ကို ပေါင်းစပ်ထားလို့ ညရဲ့ အနုစိတ်အလှတရားကို ပြန်လည်ခံစား
ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းနားလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ညတစ်ည
ထက် သင်က ပိုမိုတောက်ပနေမှာပါ။
အသစ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Super Night Selfie ဟာ
multi-frame optimization နဲ့ multi-level exposure ကို
ပေါင်းစပ် ထားလို့ ညရဲ့ အနုစိတ်အလှတရားကို ပြန်လည်ခံစား
ဒါတင်မကသေးဘဲ Night Portrait ဟာ အရည်အသွေးမြင့် အနုပညာလက်ရာတွေ ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ဖို့ AI ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကပဲ Super Night Selfie နဲ့ multi-frame noise reduction တွေရဲ့ အလွှာတွေကို ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး သင် တစ်ယောက်တည်းတင်မကဘဲ ညအခိုက်အတန့်တွေကိုပါ ထွန်းလင်းတောက်ပသွားစေမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲမှိန်နေပါစေ_သင်က အမြဲတမ်းအတွက် ကြယ်ပွင့်လေးပါပဲ။
ဒါတင်မကသေးဘဲ Night Portrait ဟာ အရည်အသွေး
မြင့် အနုပညာလက်ရာတွေ ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ဖို့ AI ကို
အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကပဲ Super Night Selfie
နဲ့ multi-frame noise reduction တွေရဲ့ အလွှာတွေ
ကို ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး သင် တစ်ယောက်တည်းတ
င်မကဘဲ ညအခိုက်အတန့်တွေကိုပါ ထွန်းလင်းတောက်ပ
ဒါတင်မကသေးဘဲ Night Portrait ဟာ
အရည်အသွေးမြင့် အနုပညာလက်ရာတွေ ဖန်တီး
ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ AI ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါက
ပဲ Super Night Selfie နဲ့ multi-frame noise
reduction တွေရဲ့ အလွှာတွေကို ချိတ်ဆက်ပေး
ထားပြီး သင် တစ်ယောက်တည်းတင်မကဘဲ
ရှေ့ကင်မရာနဲ့ နောက်ကင်မရာကို တစ်ချိန်တည်းဖွ
င့်ပြီး သင် ကိုယ်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က
ကမ္ဘာကြီးကို အမိအရ ရိုက်ကူးလိုက်ရအောင်။ န
ောက်ဆုံးတော့ သင့်အကြောင်းအရာတွေကို ဘက်နှ
ရှေ့ကင်မရာနဲ့ နောက်ကင်မရာကို တစ်ချိန်တည်းဖွင့်ပြီး
သင် ကိုယ်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာ
ကြီးကို အမိအရ ရိုက်ကူးလိုက်ရအောင်။ နောက်ဆုံး
တော့ သင့်အကြောင်းအရာတွေကို ဘက်နှစ်ခုလုံးကနေ
ရှေ့ကင်မရာနဲ့ နောက်ကင်မရာကို တစ်ချိန်တည်းဖွင့်ပြီး သင် ကိုယ်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို အမိအရ ရိုက်ကူးလိုက်ရအောင်။ နောက်ဆုံးတော့ သင့်အကြောင်းအရာတွေကို ဘက်နှစ်ခုလုံးကနေ ခံစားတင်ပြလို့ရပြီပေါ့။
ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ဖန်တီးရိုက်ကူးတဲ့အခါ Steadiface Selfie Video ဟာ သင့်မျက်နှာလေးကို ဘောင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်နေစေပြီး အချိန်တိုင်းမှာ ကြည်လင်လှပတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ဖန်တီးရိုက်ကူးတဲ့အခါ Steadiface Selfie Video ဟာ သင့်မျက်နှာလေးကို ဘောင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်နေစေပြီး အချိန်တိုင်းမှာ
ကြည်လင်လှပတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ဖန်တီးရိုက်ကူးတဲ့အခါ Steadiface Selfie Video ဟာ သင့်မျက်နှာလေးကို ဘောင်ထဲမှာ
ငြိမ်သက်နေစေပြီး အချိန်တိုင်းမှာ ကြည်လင်လှပတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝအသစ်ဖြစ်တဲ့ Portrait light effect က သင့်ကိုယ်ပိုင် ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးလိုက်ပါပြီ။
လုံးဝအသစ်ဖြစ်တဲ့ Portrait light effect က သင့်ကိုယ်ပိုင်
ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု
လုံးဝအသစ်ဖြစ်တဲ့ Portrait light effect က သင့်ကိုယ်ပို
င် ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု
ခြားနားသိသာပြီး စစ်မှန်တဲ့ သင် ဆိုတာကို ဖော်ပြဖို့ သင့်မျက်နှာလေးပေါ်က သေးငယ်တဲ့ မှည့်တစ်ပေါက်လို တစ်ကိုယ်ရေ အသေးစိတ်လေးတွေကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းလိုက်ပါ။
ခြားနားသိသာပြီး စစ်မှန်တဲ့ သင် ဆိုတာကို
ဖော်ပြဖို့ သင့်မျက်နှာလေးပေါ်က သေးင
ယ်တဲ့ မှည့်တစ်ပေါက်လို တစ်ကိုယ်ရေ
ဖော်ပြဖို့ သင့်မျက်နှာလေးပေါ်က သေးငယ်တဲ့
မှည့်တစ်ပေါက်လို တစ်ကိုယ်ရေ အသေးစိ
V21e ရဲ့ ယေဘုယျအထူဟာ အစားမထိုးခင်က အရင်ပစ္စည်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ ၆% လျော့နည်းသွားပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုမို အံ့သြသွားရလောက်အောင် ပါးလွှာတဲ့ ၇.၃၈ မီလီမီတာ ဒီဇိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ နူးညံ့ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲအသွင်ဆောင်တဲ့ လုံးချောချောဘောင်တစ်ခုနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ငြိမ်းအေးတဲ့ ကိုင်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံကို တစ်နေ့တာလုံး ခံစားရရှိစေမှာပါ။.
V21e ရဲ့ ယေဘုယျအထူဟာ အစားမထိုးခင်က အရင်ပစ္စည်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ ၆% လျော့နည်းသွားပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုမို အံ့သြ
သွားရလောက်အောင် ပါးလွှာတဲ့ ၇.၃၈ မီလီမီတာ ဒီဇိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ နူးညံ့ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲအသွင်ဆောင်တဲ့ လုံးချော
ချောဘောင်တစ်ခုနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ငြိမ်းအေးတဲ့ ကိုင်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံကို တစ်နေ့တာလုံး ခံစား
V21e ရဲ့ ယေဘုယျအထူဟာ အစားမထိုးခင်က အရင်ပစ္စည်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ ၆% လျော့နည်းသွားပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုမို အံ့သြသွားရ
လောက်အောင် ပါးလွှာတဲ့ ၇.၃၈ မီလီမီတာ ဒီဇိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ နူးညံ့ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲအသွင်ဆောင်တဲ့ လုံးချောချောဘောင်တစ်ခုနဲ့
ပေါင်းစပ်ထားလို့ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ငြိမ်းအေးတဲ့ ကိုင်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံကို တစ်နေ့တာလုံး ခံစားရရှိစေမှာပါ။.
၆.၄၄ လက်မ အရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်ဟာ FHD+2400*1080 အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အရောင်တွေကို ခမ်းနားစွာ ပြသပေးရင်း သင့်မျက်လုံးများကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆.၄၄ လက်မ အရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်ဟာ FHD+2400*1080 အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စစ်မှ
န်တဲ့ အရောင်တွေကို ခမ်းနားစွာ ပြသပေးရင်း သင့်မျက်လုံးများကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆.၄၄ လက်မ အရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်ဟာ FHD+2400*1080 အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အရော
င်တွေကို ခမ်းနားစွာ ပြသပေးရင်း သင့်မျက်လုံးများကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ဦးဆောင် ဒီဇိုင်နာတွေဟာ သဘာဝတရားနဲ့ဘဝ ကနေ ဉာဏ်ကွန့်မြူးပြီး အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အရောင်သစ်နှစ်မျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ဦးဆောင် ဒီဇိုင်နာတွေဟာ သဘာဝတရား
နဲ့ဘဝ ကနေ ဉာဏ်ကွန့်မြူးပြီး အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့
အရောင်သစ်နှစ်မျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ဦးဆောင် ဒီဇိုင်နာတွေဟာ သဘာဝတရားနဲ့
ဘဝ ကနေ ဉာဏ်ကွန့်မြူးပြီး အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အရောင်သ
စ်နှစ်မျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိန်တွေဟာ အချိန်တိုင်းအတွက် ဝင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ ရတနာတွေပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ တောက်ပမှုဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ မြေမှုန်လေးများကတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အံ့အားသင့်မှုတွေ ချန်ရစ်ခဲ့တယ်လေ။
စိန်တွေဟာ အချိန်တိုင်းအတွက် ဝင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ ရတနာတွေ
ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ တောက်ပမှုဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ မြေမှုန်လေးများက
တစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အံ့အားသင့်မှုတွေ
ရှေးခေတ်ရောမကော်လံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကြောင့် ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမ်း နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မဟာဆန်တဲ့ အဆင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Roman Black ပုံစံမှာ ဖွေရှာပြီး အဆုံးအစမဲ့ အလှတရားမှာ နစ်မျောလိုက်ပါ။
ရှေးခေတ်ရောမကော်လံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့
ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကြောင့် ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမ်း နာမည်ကျော်ကြားပါ
တယ်။ သူတို့ရဲ့ မဟာဆန်တဲ့ အဆင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Roman Black
ပုံစံမှာ ဖွေရှာပြီး အဆုံးအစမဲ့ အလှတရားမှာ နစ်မျောလိုက်ပါ။
Dual Tone Step ဒီဇိုင်းဟာ ဖုန်းရဲ့အရောင်စီမံချက်တွေကို ပါးနပ်စွာ ပဲ့တင်ထပ်စေပြီး အများနဲ့မတူ သိသိသာသာ တစ်မူတိုးထွ
က်ထင်ရှားနေမှာပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပါပဲ။
Dual Tone Step ဒီဇိုင်းဟာ ဖုန်းရဲ့အရောင်စီမံချက်တွေကို ပါးနပ်စွာ ပဲ့တင်ထပ်စေပြီး အများနဲ့မတူ သိသိသာသာ တစ်မူတိုးထွက်ထင်ရှားနေမှာပါ။
ဒါက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပါပဲ။
ပထမဆုံးနဲ့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်က အမဲရောင်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ အလှဆင်တဲ့ ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး
ကာဗာနဲ့ တစ်ရောင်တည်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအဆင့်ကတော့ ဘက်ထရီ အဖုံးပါပဲ။
ပထမဆုံးနဲ့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်က အမဲရောင်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ အလှဆင်တဲ့ ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကာဗာနဲ့
တစ်ရောင်တည်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအဆင့်ကတော့ ဘက်ထရီ အဖုံးပါပဲ။
Dual Tone Step ဒီဇိုင်းဟာ ဖုန်းရဲ့အရောင်စီမံချက်တွေကို ပါးနပ်စွာ ပဲ့တင်ထပ်စေပြီး အများနဲ့မတူ သိသိသာသာ တစ်မူတိုးထွက်ထင်ရှားနေမှာပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပါပဲ။
ပထမဆုံးနဲ့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်က အမဲရောင်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ အလှဆင်တဲ့ ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကာဗာနဲ့ တစ်ရောင်တည်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအဆင့်ကတော့ ဘက်ထရီ အဖုံးပါပဲ။
AG (anti-glare) ဖန်သားမျက်နှာပြင်က နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ပရီမီယမ်ဆန်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ခံစားရစေပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လက်ဗွေရာတွေ ကျန်ခဲ့မှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့လို့ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
AG (anti-glare) ဖန်သားမျက်နှာပြင်က နူးညံ့
သိမ်မွေ့ပြီး ပရီမီယမ်ဆန်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ခံစားရစေ
ပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လက်ဗွေရာတွေ ကျန်ခဲ့မှာ
ကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့လို့ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်နေမှာ အမှ
ပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လက်ဗွေရာတွေ ကျန်ခဲ့
မှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့လို့ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်နေမှာ
အရည်အသွေးမြင့် 64MP HD ပင်မကင်မရာက အနီးကပ်ဆွဲကြည့်တာရော၊ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ဖို့ပါ ထိုက်တန်လောက်တဲ့ အခိုက်အ
တန့်တိုင်းနဲ့အတူ သင်မြင်တွေ့နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရှင်းလင်းစွာ ရိုက်ကူးပေးမှာပါ။ အထူးမြင်ကွင်းကျယ် 8MP ကင်မရာ က
မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုမို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၁၂၀° အကျယ်ရှုထောင့်နဲ့အတူ တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုမိုတွေ့မြ
င်ခံစားယူဆောင်လိုက်ပါ။ 2MP macro ကင်မရာ ဆိုတာက မမြင်နိုင်တဲ့ အနီးအနားက အံ့သြဖွယ်ရာလေးတွေကို ၄ စင်တီမီတာ
ကနေ အနီးကပ် မြင်တွေ့ရတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး သင့်မျက်လုံးနဲ့ မြင်တွေ့သမျှ အရာအားလုံးရဲ့ အနေအထားကို ချက်ချင်း ဖွင့်ချလှ
အရည်အသွေးမြင့် 64MP HD ပင်မကင်မရာက အနီးကပ်ဆွဲကြည့်တာရော၊ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ဖို့ပါ ထိုက်တန်လောက်တဲ့ အခိုက်အတန့်တိုင်းနဲ့အတူ
သင်မြင်တွေ့နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရှင်းလင်းစွာ ရိုက်ကူးပေးမှာပါ။ အထူးမြင်ကွင်းကျယ် 8MP ကင်မရာ က မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုမို ပေးစွမ်းနိုင်ပါ
တယ်။ ၁၂၀° အကျယ်ရှုထောင့်နဲ့အတူ တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုမိုတွေ့မြင်ခံစားယူဆောင်လိုက်ပါ။ 2MP macro ကင်မရာ ဆိုတာ
က မမြင်နိုင်တဲ့ အနီးအနားက အံ့သြဖွယ်ရာလေးတွေကို ၄ စင်တီမီတာ ကနေ အနီးကပ် မြင်တွေ့ရတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး သင့်မျက်လုံးနဲ့ မြင်တွေ့
သမျှ အရာအားလုံးရဲ့ အနေအထားကို ချက်ချင်း ဖွင့်ချလှစ်ဟပြသပေးပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့် 64MP HD ပင်မကင်မရာက အနီးကပ်ဆွဲကြည့်တာရော၊ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ဖို့ပါ ထိုက်တန်လောက်တဲ့ အခိုက်အတန့်တိုင်းနဲ့အတူ သင်မြင်တွေ့နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရှင်းလင်းစွာ ရိုက်ကူးပေးမှာပါ။ အထူးမြင်ကွင်းကျယ် 8MP ကင်မရာ က မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုမို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၁၂၀° အကျယ်ရှုထောင့်နဲ့အတူ တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုမိုတွေ့မြင်ခံစားယူဆောင်လိုက်ပါ။ 2MP macro ကင်မရာ ဆိုတာက မမြင်နိုင်တဲ့ အနီးအနားက အံ့သြဖွယ်ရာလေးတွေကို ၄ စင်တီမီတာ ကနေ အနီးကပ် မြင်တွေ့ရတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး သင့်မျက်လုံးနဲ့ မြင်တွေ့သမျှ အရာအားလုံးရဲ့ အနေအထားကို ချက်ချင်း ဖွင့်ချလှစ်ဟပြသပေးပါတယ်။
အထူးမြင်ကွင်းကျယ် ညမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ညရဲ့ အလှကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ။ ခန့်ညားပြီး ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညကို သီးသန့်ဖော်ကြူးပြသထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက်လည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်ပါဦး။
အထူးမြင်ကွင်းကျယ် ညမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ညရဲ့ အလှကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ။ ခန့်ညားပြီး ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညကို
သီးသန့်ဖော်ကြူးပြသထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက်လည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်ပါဦး။
အထူးမြင်ကွင်းကျယ် ညမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ညရဲ့ အလှကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ။ ခန့်ညားပြီး ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညကို သီး
သန့်ဖော်ကြူးပြသထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက်လည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်ပါဦး။
သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြို့ပြမီးရောင်တွေထဲကို ထွန်းလင်းတောက်ပမှုလေး ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Stylish Night Filters နဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် ညတွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဟလိုက်လေ။
သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြို့ပြမီးရောင်တွေထဲကို ထွန်းလင်းတောက်ပမှုလေး ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Stylish Night
Filters နဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် ညတွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဟလိုက်လေ။
သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြို့ပြမီးရောင်တွေထဲကို ထွန်းလင်းတောက်ပမှုလေး ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ Stylish Night Filters နဲ့ သင်ကို
ယ်တိုင် ညတွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဟလိုက်လေ။
သင် အသားပေးပြသချင်တဲ့ အရာကို ကင်မရာထဲမှာ ချက်ချင်း ဗဟိုဆုံချက်ချိန်ပေးဖို့ နှစ်ချက်တို့ထိ လိုက်ရုံပါပဲ။ လုပ်ကြည့်ပါ၊
မျက်တောင်ခတ်ကြည့်ပါ၊ ဘယ်အရာကိုမှ လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုအောင် အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကင်မရာက လိုက်ယူရိုက်ကူး
သင် အသားပေးပြသချင်တဲ့ အရာကို ကင်မရာထဲမှာ ချက်ချင်း ဗဟိုဆုံချက်ချိန်ပေးဖို့ နှစ်ချက်တို့ထိ လိုက်ရုံပါပဲ။ လုပ်ကြည့်ပါ၊ မျက်တောင်ခ
တ်ကြည့်ပါ၊ ဘယ်အရာကိုမှ လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုအောင် အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကင်မရာက လိုက်ယူရိုက်ကူးပေးမှာပါ။
သင် အသားပေးပြသချင်တဲ့ အရာကို ကင်မရာထဲမှာ ချက်ချင်း ဗဟိုဆုံချက်ချိန်ပေးဖို့ နှစ်ချက်တို့ထိ လိုက်ရုံပါပဲ။ လုပ်ကြည့်ပါ၊ မျက်တောင်ခတ်ကြည့်ပါ၊ ဘယ်အရာကိုမှ လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုအောင် အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ကင်မရာက လိုက်ယူရိုက်ကူးပေးမှာပါ။
ထပ်တိုးထားတဲ့ RAM နည်းပညာ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ သင့်ရဲ့ 8GB RAM က အပို Memory 3GB ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး 8GB + 3GB ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို
ထပ်တိုးထားတဲ့ RAM နည်းပညာ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ သင့်ရဲ့ 8GB RAM က အပို Memory 3GB ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး 8GB + 3GB ရဲ့
စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုမို သိမ်းဆည်းပါ၊ ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့။ 1TB ထိ ထပ်တိုးလို့ရတဲ့ 128GB ROM က သင့်ဖုန်းထဲမှာ ထားချင်တဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးကို လုံးဝ(လုံးဝ) သိမ်းထားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုမို သိမ်းဆည်းပါ၊ ပိုပြီး
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့။ 1TB ထိ ထပ်တိုးလို့ရတဲ့ 128GB
ROM က သင့်ဖုန်းထဲမှာ ထားချင်တဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်း
တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးကို လုံးဝ(လုံးဝ)
စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုမို သိမ်းဆည်း
ပါ၊ ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့။ 1TB ထိ
ထပ်တိုးလို့ရတဲ့ 128GB ROM က သင့်ဖုန်းထဲ
မှာ ထားချင်တဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊
ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးကို လုံး
ဝ(လုံးဝ) သိမ်းထားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ 4000mAh ဘက္ထရီကို 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ ၆၆% အထိ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက္ထရီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်သောကတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှလည်း ဖြစ်စေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြီးမားတဲ့ 4000mAh ဘက္ထရီကို 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ ၆၆% အထိ ပြန်လည်အားဖြ
ည့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက္ထရီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်သောကတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှလည်း ဖြစ်စေတော့မှာ
ကြီးမားတဲ့ 4000mAh ဘက္ထရီကို 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာ ၆၆% အထိ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက္ထရီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်သောကတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှလည်း ဖြစ်စေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Snapdragon7စီးရီး မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှာ 8nm process နဲ့ 8 cores အတူတူ ပါဝင်ကာ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ မျိုးဆက်ထက် စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့် ၅၁% လောက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုလည်း ခံစား ရရှိစေမှာပါ။
Snapdragon7စီးရီး မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှာ 8nm process နဲ့ 8 cores အတူတူ ပါဝင်ကာ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ မျိုးဆက်ထက်
စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့် ၅၁% လောက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုလည်း ခံစား ရရှိစေမှာပါ။
Snapdragon7စီးရီး မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှာ 8nm process နဲ့ 8 cores အတူတူ ပါဝင်ကာ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ မျိုးဆက်ထက် စွမ်းဆော
င်ရည်အားဖြင့် ၅၁% လောက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုလည်း ခံစား ရရှိစေမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နေရာလွတ် ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ အတည်တကျ ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်တက်ကြွကြွ စီစဉ်ထားရှိပြီး သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားလို့ စနစ်က သုံးထားတဲ့ Memory တွေကို ဖျက်ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ နေရာက အပိုစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေပြီး စနစ်အဆင်မပြေမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေကာ အပ်ပလီကေးရှင်းများကို ပိုမို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ နေရာပိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နေရာလွတ် ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ အတည်တကျ ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်တက်ကြွကြွ စီစ
ဉ်ထားရှိပြီး သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားလို့ စနစ်က သုံးထားတဲ့ Memory တွေကို ဖျက်ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်း
ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ နေရာက အပိုစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေပြီး စနစ်အဆင်မပြေမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေကာ အပ်ပလီ
ကေးရှင်းများကို ပိုမို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ နေရာပိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နေရာလွတ် ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ အတည်တကျ ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်တက်ကြွကြွ စီစဉ်ထားရှိပြီး
သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားလို့ စနစ်က သုံးထားတဲ့ Memory တွေကို ဖျက်ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းစ
ဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ နေရာက အပိုစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေပြီး စနစ်အဆင်မပြေမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေကာ အပ်ပလီကေးရှင်းများကို ပိုမို ချောမွေ့စွာ
ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ နေရာပိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Multi-Turbo ဟာ အကောင်းဆုံးပြုပြင်ထားတဲ့ ART++ Turbo နဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး တခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ လက်ခံရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တွဲဖက်စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်း သင့်ကို အသက်ရှုမှားလောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Multi-Turbo ဟာ အကောင်းဆုံးပြုပြင်ထားတဲ့ ART++ Turbo နဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး တခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ချ
က်တွေရဲ့ လက်ခံရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တွဲဖက်စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်း သင့်ကို အသက်ရှုမှားလောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိဖြစ်တဲ့ သုခုမမူဟန်နဲ့အတူ Android 11 ကို အခြေခံတဲ့ Funtouch OS 11.1 ဟာ ရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကြည်နူးမှုလေးတွေကို နောက်တစ်ဆင့်တိုး ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးရှင်းမှုရဲ့ အလှတရားကို ပြန်သွားထားကာ မတူထူးခြားပြီး စွမ်းအားပြည့် vivo ဖုန်း သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ သေချာတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိဖြစ်တဲ့ သုခုမမူဟန်နဲ့အတူ Android 11 ကို အခြေခံတဲ့ Funtouch OS 11.1 ဟာ ရုပ်ထွက်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ စိတ်ကြည်နူးမှုလေးတွေကို နောက်တစ်ဆင့်တိုး ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးရှင်းမှုရဲ့ အလှတရားကို ပြန်သွားထားကာ မတူ
ထူးခြားပြီး စွမ်းအားပြည့် vivo ဖုန်း သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ သေချာတဲ့ ခြေလှမ်း
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိဖြစ်တဲ့ သုခုမမူဟန်နဲ့အတူ Android 11 ကို အခြေခံတဲ့ Funtouch OS 11.1 ဟာ ရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
စိတ်ကြည်နူးမှုလေးတွေကို နောက်တစ်ဆင့်တိုး ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးရှင်းမှုရဲ့ အလှတရားကို ပြန်သွားထားကာ မတူထူးခြားပြီး စွမ်းအား
ပြည့် vivo ဖုန်း သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ သေချာတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ရုပ်ထွက်ကြည်လင်နှုန်းအမြင့်စားနဲ့ Netflix မှာ သင် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်အတွက်လည်း Hi-Res အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်က ပြီးပြည့်စုံသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ထွက်ကြည်လင်နှုန်းအမြင့်စားနဲ့ Netflix မှာ သင် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်အတွက်လည်း Hi-Res အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်က ပြီးပြည့်စုံသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ထွက်ကြည်လင်နှုန်းအမြင့်စားနဲ့ Netflix မှာ သင် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ အသံပိုင်း
ဆိုင်ရာရလဒ်အတွက်လည်း Hi-Res အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်က ပြီးပြည့်စုံသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. 44MP ပင်မကင်မရာကို အသုံးပြုသည့်အခါ 44MP ပုံရိပ်ရလဒ်များကို High resolution mode တွင်သာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2. ဖုန်း၏တိုင်းတာသည့်အထူတွင် ကင်မရာအထွက် ပါဝင်မှုမရှိပါ။ ဖုန်း၏ အပါးလွှာဆုံး အပိုင်းသည် ၇.၃၈ မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။
3. အမှန်တကယ်အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်သည် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ မတူညီမှုများကြောင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။
4. ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာပါက ထောင့်မှန်စတုဂံပုံအပြည့်တွင် ၆.၄၄ လက်မ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ရှိသည်။ အမှန်တကယ် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ သည် အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။
5. AnTuTu မှ စမ်းသပ်မှုရလဒ်အပေါ် အခြေခံထားသည်။
6. အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော RAM / ROM သည် လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော အက်ပ်များ၏ သိုလှောင်မှုကြောင့် လျော့နည်းသည်။
7. တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်သော အပ်ပလီကေးရှင်း အရေအတွက်သည် သိမ်းထားပြီးဖြစ်သော မန်မိုရီ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ vivo ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ချိန်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သော အပ်ပလီကေးရှင်းအများဆုံးအရေအတွက်သည် ၂၀ ဖြစ်သည်။
8. V21e က vivo standard charger(FlashCharge adapter 11V / 3A) ပါရှိပြီး 33W အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းစွမ်းအားသည် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲထိန်းညှိနိုင်ပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုမှုကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
9. အချက်အလက်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်နှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများ၏ အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဆော့ဝဲဗားရှင်း၊ တိကျသောစမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် ဖောပြထားသော နှိုင်းယှဉ်မှုများအားလုံးသည် vivo ထုတ်ကုန်များကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
10. မတူညီသောရိုက်ကူးမှုများသည် မတူညီသော ပစ်ဇယ်အရေအတွက်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
11. ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ အပြောင်းအလဲများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် Vivo သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာ၏ဖော်ပြချက်များအား ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုအသုံးမပြုခင် သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါရန်။
12. ပြင်ပ မျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှုသည် လက်ဗွေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၏ တိကျမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ တရားဝင် vivo In-Display Fingerprint Scanning screen protector ကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုပါ။
13. စာမျက်နှာပြင်ပရှိ ဖုန်းအပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းပုံများနှင့် ထုတ်ကုန်ပုံများသည် ပုံဥပမာပြရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်သည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
14. ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ အပြောင်းအလဲများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် Vivo သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာ၏ဖော်ပြချက်များအား ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုအသုံးမပြုခင် သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါရန်။